VaGwisai neVamwe Vavo Vashanu Vanobvisiswa Mari yeChibatiso Inoita $2000 paMunhu
Kurume 16, 2011
Vaimbova mumiriri weHighfield muparamende uye vachishanda nesangano re International Socialist Organization kana kuti ISO, VaMunyaradzi Gwisai nevamwe vavo vashanu, vabvumidzwa nedare repamusoro kuti vabhadhare mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa.
Vatanhatu ava vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende vachishandisa nzira yokuratidzira seyakashandiswa kuEgypt nekuTunisia.
VaGwisai pamwe nevaimbova mutungamiri wesangano revadzidzi reZinasu, Va Hopewell Gumbo, nevamwe vavo vana, vabhadhariswa mari inoita zviuru zviviri zvemadhora pamunhu.
Mutongi wedare repamusoro, Va Samuel Kudya, varamba zvasvitswa kudare nemuchuchisi wehurumende panyaya iyi, Va Edmore Nyazamba, zvekuti hurumende haisati yapedza kuferefeta nyaya iyi kunze kwenyika vachiti izvi zvinoburitsa pachena kuti nyaya yehurumende haina kusimba.
Va Kudya vatiwo hapana humbowo hwasvitswa kudare nehurumende hunoratidza kuti kana vanhu ava vakaburitswa muhusungwa havazouya pakutongwa kwemhosva yavari kupomerwa. Vatiwo vanhu ava vasvitse mapasipoti avo kumunyori wematare kuitira kuti vasakwanise kubuda kunze kwenyika sezvo VaNyazamba vanga vaudza dare kuti vanhu ava vanozivana nevanhu vakawanda kunze kwenyika zvokuti vanogona kubuda munyika vakasauya pakutongwa kwenyaya iyi.
VaKudya vati havo nyaya yehurumende ingangonetsa pachatongwa nyaya iyi sezvo vachiti mufakazi wehurumende angangoroverera vasungwa ava nenyaya yekuronga zvekupidigura hurumende, ari mupurisa mumwe chete akapinda muchivande mumusangano unonzi wakaitwa nevasungwa ava mwedzi wapera.
Va Kudya vatiwo zviri pachena kuti vasungwa ava havana mukana wekuvhiringidzana nevafakazi sezvo vafakazi vacho vasingwazivikanwe nevasungwa.
Muchuchisi wenyaya iyi akanga asvitsawo kudare kuti vanhu ava vaizokonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muhusungwa. VaNyazamba vati sangano re International Socialist Organization ndiro rakakonzeresa kuti vanhu varatidzire kuEgypt neku Tunisia vachiti hazviite kuti vanhu ava vaburitswe muhusungwa sezvo vari nhengo dzesangano iri muZimbabwe. Asi VaKudya varamba kuzvitambira.
Mudzimai waVa Hopewell Gumbo, Amai Tanatswa Mandoreva Gumbo, vati vafarawo zvikuru nemutongo wedare pakatariswa nguva yanga yagara murume wavo mujere pamwe nevamwe vake.
Va Gwisai nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupigura hurumende vachishandisa nzira yokuratidzira sezvakaitwa ku Egypt nekuTunisia izvo zvakakonzera kuti vatungamiri venyika mbiri idzi vasiye basa.
Asi VaGwisai nevamwe vavo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti musangano wavakaita waiva wekuda kuonesana kuti chii chingadzidzwa nevashandi pamwe nevadzidzi vemu Zimbabwe pamusoro pezvakaitika kunyika idzi.